Maxkamada Hargeysa oo dambi ku weysay weriye Cabdimaalik Muuse Coldoon | Arrimaha Bulshada
Home News Maxkamada Hargeysa oo dambi ku weysay weriye Cabdimaalik Muuse Coldoon
Maxkamada Hargeysa oo dambi ku weysay weriye Cabdimaalik Muuse Coldoon
Thursday, February 03, 2022 News
Bulsha:- Somaliland ayaa go’aan culus kasoo saartay kiiska Wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon, kaas oo muddooyinkii u dambeeyey ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa.
Maxkamada gobolka Maroodi-jeex ayaa maanta oo Khamiis ah si rasmi ah ugu dhowaaqday in Coldoon lagu waayey wax dambi ah, waxayna amartay in laga sii daayo xabsiga.
Xeer ilaalinta maxkamadda ayaa dhanka kale la sheegay inay rafcaan ka qaadatay go’aanka kasoo baxay maxkamadda Hargeysa ee lagu sii daayey Wariyaha.
Go’aanka sii deynta ee Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey ehelladiisa iyo bulshada Soomaaliyeed oo aad uga hadal haya baraha bulshada.
Coldoon oo xabsiga loo taxaabay taariikhdu markay aheyd 23/08/2021-kii, ayaa loo soo jeediyey eedeymo culus, sida dacaayad qaran dumisnimo ah, faafinta warar been abuur ah iyo aflagaadeyn siyaasiyiinta iyo golaha sharci dejinta ee Somaliland.
Xiisadda ayaa kasii dartay markii uu Coldoon shaaca ka qaaday in macalimad Joy Isa ay tahay Masiixiyad howl diimeed u timid magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland.